Ummanni Oromoo Mirga Of Ittisuu Uumamni Kenneefitti Fayyadamuu Qaba! – OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATA
Ummanni Oromoo Mirga Of Ittisuu Uumamni Kenneefitti Fayyadamuu Qaba!
Oromoon yoo mammaakku tortooraan roobaa hin badadu jedha, Wayyaaneen akkuma mammaaksa kanaa dhiiga ilmaan sabootaatiin keessumaa dhiiga ilmaan Oromoo dhanaglaasa turtee fi jirtuun tortortee jirti, harkii ishii xuraayeera, bakka deemteetti, halakanii guyyaa dhiigni ilmaan Oromoo waggoota 25n darbaniif dhangalaasaa turte faanaa deemee itti iyyaa jira. Dhugaan lallabee dhiphisaa jira.
Wayyaaneen dhugaa faana deemee itti iyyaa jiru kana karaa sirrii fi sirna qabuun deebii keennuurra akkuma mammaaksa Oromoo isa “tortoraan roobaa hin badadu” jedhu sanii silaa takkan xuraaye jettee ittuu dhiiga dibachaa jirti. Sababa malee Oromoo oromummaa isaan qofa yakkitee hidhaa, dararaa fi ajjeesaa jirti.
Wayyaaneen waggoottan 25n darbaniif hidhaa, dararaa fi ajjeechaa qofa ummata Oromoorratti raawwachaa hin turre. Akka ummanni Oromoo hiyyummaa bara baraa jalatti kufee hafuuf waan dandeeche hunda raawwachaa turte, raawwachaas jirti. Oromoorratti shira diinagdee, baruumsaa, saamicha qabeenyaa, qayee fi biyya abbaa isaarraa buqqisuu raawwatteetti, raawwachaas jirti.
Ummanni Oromoo osoo ummata qabeenya ummamaa isa gahee irraa hafu qabuu, immammata Wayyaaneen ta’ee jettee isa miidhuuf irratti diriirsteen waggoota 25n darbaniif hiyyummaa jabaaf saaxilameera.
Wayyaaneen OPDO waliin ta’uun warshaalee ykn kaanpaaniwwan muka ciranii daldalan Bosona naannoo Oromiyaa hedduu keessa dhaabuun busona Oromoo mancaasaa turteetti, mancaasaas jirti. Bosonni Baalee Harannaan, Iluu abbaa Bor, yaayyuu, Lixa Oromiyaa Onoota hedduu keessatti akkasuma bosonni jimmaa ciramaa turee fi jiru kanaaf ragaa guddaadha. Mancahiinsa kana hordofees yeroo ammaa kana bosonni naannoo Oromiyaa dhibbantaa guddaan ciramee Oromiyaan gogiinsaaf saaxilamtee ummanni Oromoo godinoota akka Harargee bahaa fi lixaa, Baalee, Boorana, Gujii fi Shawaa bahaa keessatti beelaan dararamaa jira.
Loon dhumaa, namni qayee isaa dhiisee baqachaa ykn kadhaaf saaxilameera.
Wayyaaneen waggoottan 25n darban bosona Oromiyaa cirtee gurgurachuun lafa Oromoo qullaatti hanbisuu qofattis hin dhaabbanne. Lafa gabbataa qonnaaf oolu Giddu galeessa Oromiyaa Naannawa Finfinnee, Finfinneerraa gama Lixaa, Bahaa, Kibba Bahaa, kaaba Finfinnee akkasumas Baalee, Arsii, Gujii, Harargee, Iluu A/Booraa, Horroo Guduruu, wallagga Bahaa fi lixaa, Jimmaa keessatti ummata Oromoo naannichaa buqqisuun halagatti gurguraa turtee jirti, gurguraas jirti. Lafti Albuudoota adda addaa, midhaan nyaataa baayyinaan homishu , lafti Bunaa, Lafti qonna shankoora oolaa jiru heektaara miliyoonaan lakkaawwamuu yeroo ammaa kana harka qondaaloota Wayyaanee fi waayiloota isaanii jira.
Oromoon beela’aa, qayee fi qabeenya isaarraa buqqifamaa, xurii summaawaa warshaalee halagaa kanarraa bahuun lubbuu isaa fi beelladoota isaa dhabaa jira.
Ummanni Oromoo bulchiinsa murna gabroonfattuu Wayyaanee jalatti beela, daara fi dhibee adda addaatiin dararamuu qofaanis hafaa hin jiru. Biyya isaas akka dhabu wayyaaneedhaan shirri hedduun dalagamaa tureera, dlagamaas jira. Wayyaaneen ummata Oromoo beelaa fi waraana itti bobbaasuun hidhuu, ajjeesuu cinaatti akka inni biyya kiyya jedhu, kan boruuf abdatu hin qabaanne karaa adda addaatiin olloota isaa keessaa garaaf bultoota bor hin beeknee hidhachiiftee itti bobbaasaa jirti.
Waggoota 25n darbaniif keessumaa ammoo waggoota as aanan darban keessa Wayyaaneen Bahaa- Dhihaan, kaabaa –kibbaan saboota ollaa ummata Oromoo jiran keessaa garaaf bultootaa fi boru hin beeknee leenjiftee, hidhachiiftee Oromiyaa weerarsiisaa jirti. Werartoonni qondaaloota wayyaaneetiin hogganamun kunneenis yeroo ammaa kana humna isaanii jabeeefachuun ummata Oromoo harka duwwaa jiru meeshaalee gurguddoon haleelaa jiru. Ummata Oromoo barootaaf ollaa isaa waliin nagahaan jiraachaa turee fi jiru goolaa jiru. Hidhattoonni garaaf bultoonni saboota akka Sumaalee, Gambeellaa, fi Gumzi keessaa garaa isaaniif jecha wayyaaneef ergamaa jiran kunneen yakki isaan yeroo ammaa kana ummata Oromoorratti raawwachaa jiran sadarkaa akkaan yaaddeessaarra gaheera, fala atattamaas nama ani Oromoodha jedhu mararrayis barbaada.
Weerarri kun bahaa fi kibba baha Oromiyaatti baatii darbe kana guutuu deemaa turuun kan beekamu yoo ta’u; Beela hamaa naannichatti hammaatee jiruun walitti dabalamee gaagga’ama guddaa ummata Oromoo naannichaarraan gahaa jira. Kan dhumaatiin bahaa fi kibba baha Oromiyaatti hidhattoota sumaalee liyyuu hayil jedhamanii fi beelaan uumamaa jiru ishii hin quubsiin Wayyaaneen kunoo tibbba kana ammoo akkuma argaa fi dhagahaa jirrutti lixa Oromiyaatiin garaaf bultoota naannoo Gambeellaatii walitti qabdee leenjiftee ummata Oromootti bobbaaftee jirti. Oromoo naannichaa qayee fi qabeenyarraa buqqisaa jirti. Hidhattoonni naanichaa qondaaloota waraanaa Wayyaaneetiin durfaman kunneen turban dabarsine kana keessa lixa Oromiyaa onoota hedduu weeraruun lafa Oromoo keenya jechuun falmii daangaa kaasaniiru.
Jiraattootas qayee fi qabeenyarraa buqqisuun lafa isaa qabchuu yaalaniiru. Daangaa Oromoon biyya Suudaan waliin qabuus cufuuf tattaaafataniiru. Haata’uutii hin milkoofne, fuunduraafis hin milkaawan.
Weerarri gaafii daangaatiin walqabatee bahaanis haa ta’u gama lixa Oromiyaatiin hidhattoota Gaambeellaatiin gaggeeffamaa jiru kun dhuguma gaafii haqaa, gaafii ummattoonni naannichaa kaasaa jiraniidhayii jennee hoo ilaalle akka haqa of keessaa hin qabne, akka diraamaa Wayyaaneedhaan qindaayee, deemaa jiru ta’e hubanna. Kun gaafii haqaa, gaafii ummata Sumaalees, ummata Gaambeellaas miti. Kan wayyaaneeti. Wayyaaneen FXG yeroo ammaa kana hudhee ishii qabe kallattii saa jijjiruuf toftaa kana ummatte. Garuu itti hin milkooftu.
Ummanni Oromoo keessumaa dhaabni bilisummaa isaaf qabsaawu ABOn dhaaboolee saboota akka Oromoo gabrummaa habashootaa jalatti kufaniif qabsaawan kanneen akka;Sochii Bilisummaa Ummattoota Beenishaangul (SBUB), Adda Bilisummaa Biyyooleessa Ogaadeen,Adda Bilisummaa Biyyooleessa Sidaamaa, Adda Bilisummaa Ummata Gaambeellaa waliin tumsa qabsoo ijaarratee qabsoo bilisummaarra jira. Kun ammoo Wayyaanee fi ergamtoota isaa kanneen akka OPDOf mataa dhukkubbii ta’eera.
Dhiphiseera. Dhiphuu kanarraayis ka’un kunoo tarii yoo toftaan Oromoo ollaa isaa waliin walitti busuun FXG irraa akka inni fuula garagalafatu taasise jedhanii dhakaa danda’an gargalachaa jiru. Oromoo fi saboota ollaa isaa warra barootaaf waliin jiraaatee fi jiraachaa jiru maqaa daangaatiin walitti naquuf tattaafataa jiru. dhiignis dhangalahaa jira.
Ummanni Oromoo saboota ollaa isaa jiran akkuma isaa warra barootaaf gabrummaa jala turanii fi jiran waliin rakkoo tokkollee akka hin qabne ifaadha, walitti bu’iinsi amma Wayyaaneen maqaa daangaatiin bahaa fi kibba bahaa akkasumas yeroo ammaa kana ammoo lixa Oromiyaa Onoota hedduu keessatti uumtee jirtus diraamuma ishiiti. Diraamaa yaada Oromoo hiruun bara bittaa fi saamichaa dheereffachuuf qophaaye.
Haata’uutii akka yaadde kan itti milkooftu osoo hin taane dhumtii isaa kanuma ishii murna gabroonfattuu tana haxaayee balleessuu akka ta’u shakkiin hin jiru. Oromoon shira Wayyaanee kanaaf gurra kennee qabsoo walii galaa gaggeeffamaa jiru, FXG irra jirurraa seesatu hin jiru, jiraachus hin qabu.
Inni guddaa fi beekamuu qabu warreen har’a murna weertuu fi yakkamtu tana jala kaachuun gocha yakkaa ummata Oromoo, ummata barootaaf ollaa isaa waliin eenyu caalaayyuu nagahaan jiraachaa turee fi jiru dhiigsaa jiran osoo yeroon of qusatanii dansaa dha. gochi yakkaa erga diinaa bakkaan gahuuf raawwachaa jiran, weerarri maqaa daangaatiin taasisan kan milkaawuu miti. Naannaa’ee, naana’ee Wayyaaneen kufaatiin hin oolu, ammas qarqarra geechee jirti. Boru ummutootuma ollaa walii jiran kanatu walitti hafa. Guyyaa kanamoo seenaanis, seeraanis gaafatamuun waan hin oolle. Kanarraa ka’uun “bor” jedhanii yaadun akkaan barbaachisaadha.
Lakkii jennaan ammoo ummanni Oromoo ciisee hin du’u. Akkuma ummata biyya kamiituu mirga of ittisuu waan qabuuf of ittisuun dirqama ta’a. Iddoo hedduuttis of ittisaa jira. Keessumaa gotummaan ummanni Oromoo bahaa, fi kibba bahaa hidhattoota Sumaalee liyyu hayil jedhaman rukutee ofirraa deebisuu irratti muldhise fakkeenya gudadadha. Ummanni Oromoo lixa Oromiyaa jiru kan yeroo ammaa kana hidhattoota Wayyaaneen leenjiftee, hidhachiifteen weeraramee jiru akkuma ummanni Oromoo bahaa fi kibba bahaa of ittisaa jiru mirga of ittisuu isaatti fayyadamee weeratoota kana ofirraa deebisuun kan heeyyama barbaaduu miti. Of ittisuun mirga umamaati. Ummanni Oromoo lafa weerarri ykn dulli kun itti banameen ala jirus saba isaa dhumaa jiruuf mirmachuun dirqama lammummaati jenna. Inni ala jiru ammoo yakka wayyaaneen saboota walitti buusuuf dalagaa jirtu addunyaaf saaxiluun dubbii fardiidha.
Tokko taanee gabroonfataa ofirraa haa ittisnu.
#OromoStruggle – Oduu Adda Addaa, Bitootessa 1, 2017